15 / 12 / 2018 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Diseembar 15, 2018
Tiknoolajiyada Isticmaalida Tareenka Si la mid ah 1963
Kadib shilkii tareenka ee ka dhacay Ankara, oo ay ku dhinteen 3 qof 9 qofna ay ku naf waayeen, indhaha ayaa loo rogay mashaariic xawaare sare leh. Sida lagu sheegay warbixinta Rugta injineerinka farsamada, teknolojiyada loo isticmaalo jidadka tareenka ayaa la mid ah teknolojiyad la adeegsaday sanadkii 1963. oo lagu daray [More ...]
Marka loo eego barnaamijka labaad ee maalinlaha ah ee 100 ee maalinlaha ah ee uu shaaciyay Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, 26 kiiloomitir Esenboğa Metro, oo sugaya Ankara sanado badan, waxaa shaacin doona Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan. [More ...]
Tram ee Lisbon, 28 Injured
Natiijadii ka soo baxday afgambigii ka dhacay magaalada Lisbon ee caasimada Portugal, dadka 28 ayaa dhaawacmay. Shilku wuxuu dhacay fiidnimadii Jimcaha (Shalay) agagaarka 18: 00 ee gobolka Lapa ee magaalada. Saraakiisha ayaa sheegay in taraamka lagu tuuray jaran jaro. taraamka [More ...]
IZBAN Weerar ayaa tagaya 6 Maalinta
In kasta oo uusan jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya maamulka 'BZBAN iyo Demir-Yol İş illaa iyo hadda, dadka deggan İzmir ayaa leh, İzmir dhibaatadan waa in sida ugu dhaqsaha badan loo xaliyaa. Maalin kasta waan dhibaataysanahay. ”İzmir Dawlada Hoose iyo TCDD [More ...]
DHMI, 3. Aqoonsiga Xaaladaha Badbaadada ee Dhismaha Garoonka
Funda Ocak, Maareeyaha Guud ee Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka, ayaa qiray xaaladaha xun ee shaqo ee garoonka cusub. Janaayo, 'Xaaladaha goobta dhismaha ee garoonka diyaaradaha saddexaad, haa, aad baad sax u tahay. Xaaladan degena anaga [More ...]
Dhammaystirida Rugaha dib u soo celinta Saldhigga Söke Station
Shaqada dib u soo celinta ee Saldhigga Tareenka ee Söke ayaa la soo gabagabeeyey. Kuxigeenka AK Party Aydın iyo xubin ka tirsan MKYK Metin Yavuz, oo qiimeynaya howlaha deg degga ah ee horumarka ku yimid, ayaa yiri: [More ...]
Gebze-Halkalı Khadka Magaaladu waa inaanan degdegin
TMMOB iyo BTS waxay fiiro gaar ah u leeyihiin mas'uuliyadda siyaasadeed iyo maamul ee shil tareen ee Ankara, Marmaray Gebze-Halkalı Wuxuu sidoo kale walaac ka muujiyey suurtagalnimada shil haddii Dhul-hoosaadka deg-degga ah loo furi lahaa ka hor doorashooyinka maxalliga ah. [More ...]
Miyuu dhacdadani ku yaalaa Marmaray?
Waxaa la sheegay in cilad farsamo oo sababay shilka tareenka xawaaraha sare ku socda ee Ankara halkaas oo dadka 9 ay naftooda ku waayeen halka 86 dadka dhaawacmay ay sidoo kale ku jiri karaan khadka Marmaray ee Istanbul. Soo-saareyaasha hanti-yaqaannimada iyo Golaha Injineerada (COE-DAT) [More ...]
Jawaabta Turhan: Soo-saarista waa lagama maarmaan
Kadib shilkii tareenka ee ka dhacay Ankara, wadahadalada “calaamadaynta” ayaa sii socota. Khubaro, Wasiir Turhan wuxuu ku jawaabay sidan oo kale. Kadib shilkii xawaaraha xawaaraha ku socday ee ka dhacay degmada Yenimahalle ee Ankara, Wasiirka Gaadiidka Turhan wuxuu yiri var Ma jiraan wax calaamad ah? Ulaştırma [More ...]
Musiibada Musiibada Laguma Maqnaan Karin Ankara
Bakanlık Koontaroolada loo yaqaanno Koontaroolada looma maleyn inay ku sii jiri doonaan jidkaas, ayay yiril Tank Bakank. Maya, wadadaasi waxay ahayd wadada saxda ah ee lagu hubiyo magaceeda. Waxay ahayd Tareenka Xawaaraha Sare ee inaysan aheyd inuu halkaas joogo. Tareenka o [More ...]
Mashruuca Fatsa Running iyo Road Cycling
Mashaariicda ay diyaarisay Dowlada Hoose ee Magaalada Ordu ee loogu tala galay garoomada ciyaaraha kaladuwan ee loogu talagalay muwaadiniinta ayaa lagu fulinayaa mid mid. Shaqadu waxay ka socdaa Mashruuca Wadada Wadooyinka Wadooyinka iyo Runwayga, kaasoo dhisme ka socda degmada Fatsa. mashruuca [More ...]
Eskişehir Metropolitan ka soo dagaallamaya xoog leh baraf
Dawlada Hoose ee Magaalada Eski Metroehir, baraf ayaa bilaabay inuu muujiyo saamaynta bartamaha magaalada ee miyiga iyadoo masuuliyada wadooyinka iyo barafka ay barafku sii socdaan si aan kala go 'lahayn. Dayactirka iyo Dayactirka Dhismaha Wadada Dawlada Hoose ee Eskişehir [More ...]
Gawaarida Cabirka halkii laga heli lahaa aroosadda
Duqa Magaalada hahinbey Mehmet Tahmazoğlu, Sahinbey Park oo u shaqeynaya sarkaal xarig u ah Bilal Nadir Koc iyo xafladaha arooskiisa Melike Koc. Bilal Nadir Koç, oo ka shaqeeyey gaadhiga fiilada ee Şahinbey Park, [More ...]
Jawaab adag oo ka timid BTS ilaa maz lama saxiixin TS
Sagaal ayaa ku nool musiibada tareenka ee magaalada Ankara waayo 'saxeexdu ma aha sine qua non', Wasiirka ayaa yidhi, ururka ayaa jawaab adag ka bixiyay. Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, ayaa maalintii ugu dambeysay Ankara ku sugnaa [More ...]